Colaada oo Fidaysa iyo diyaarado dagaal” oo sababay barakaca Shabeellaha Hoose | Raadgoob
Colaada oo Fidaysa iyo diyaarado dagaal” oo sababay barakaca Shabeellaha Hoose
“Naftu waa qaali ee ma og tahay,” ayey tiri mid ka mid ah dadka ka baracakay colaadda gobolka Shabeellada hoose oo la hadashay BBC Somali.
“Haddii caawa lagu guulguulo (lagu handado) oo habeen dambe meel agagaarkaaga ah wax lagu sheego, waa in aad ka dhaqaaqdaa oo ka fogaataa; ma ogtahay?” ayey hadalkeeda ku dartay, Xaawo Sheekh Maxamad Nuur
Abaarta ayaa ah musiibo kale oo dadka deegaanka u diiday in ay ka sii shaqaystaan dhulkooda. Wobiga Shabelle ayaa sidoo kale engegay taas oo sababtay in wax la beeran waayo, xoolahana ay le’daan.
“(Xannuunka) Nafta baan dareennay, biyo yarina way na qabsatay,” ayey tiri haweeneyda ka qaxday gobolka.
Guuxa “Diyaaradaha ma maqlin miyaa idinka? oo waxkasta duqeynaya, ma maqlin miyaa idinka?” ayey tiri Xaawo oo la yaab uu ka muuqday.
“Dhibkaas baa na qabsaday anaga; dadka dhaqso ka soo qaxay ee xilli hore imaaday magaalada waa anaga. Dhib wayn baa jiro oo dhegeheena aan ku maqalnay”.
“Iyagoo dariishadaha saaran oo tuuteysan ayaa albaadada laga arkaayaa. Dadka guryaha kama soo baxaan xitaa haddii musqul ay u baahan yihiin,” ayey tiri.
Abaarta iyo biyo la’aan ayaa usii dheer colaaddaasi sida ay sheegeyso Xaawo Sheekh Maxamad Nuur oo hadda ku nool xero ku taalla Muqdisho.
Balse abaarta kumaysan qasbin in ay guryahooda ka qaxaan, colaadda iyo “guuxa diyaaradaha ayaa sabab u ah in ay barakacaan”, sida ay u sheegtay BBC Somali.
“Waxaa nafta nookeenay diyaaradda oo guuxeeda markii aad maqasho waxaad isdheheysaa duufaan maa jirto mise waa iyada. Qeylideeda ayey dadka oo dhan la jareynayaan”.
“Ilmihii sidii xoolo ay u foofiyeen illaa iyo hadda waan sugeynaaa”, ayey tiri Faadumo Ibraahim oo sheegtay in baqdinta iyo culeyska ay ku hayeen diyaaradaha dagaalka ee habeen iyo maalin dul heehaabaya tuuladii ay ku nooleyd iyo cabsida ay ka qaadeen duqeynta ay gaystaan.
“Halkii canug ee gacanta aan ku hayay baan la soo cararay, kuwii kale illaa iyo hadda waan sugeynaa; dhibkaas baan halkan na keenay,” ayey tiri Faadumo.
“Odayaal, ilmo iyo ayeeyooyin baan jidadka uga soo tagnay markii ay socon waayeen. Weli way soo socdaan oo hadda meel dhow baa lagu sheegay,” ayuu yiri.
Qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in 6.2 milyan oo qof oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini’aadanimo.